AC MILAN VS ARSENAL: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
AC MILAN VS ARSENAL: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
Raage March 8, 2018
(Milano) 08 Maarso 2018 – Waxaa caawa lugta hore ee wareegga 16-ka ee Europa League ku ballansan labada kooxood ee AC Milan vs Arsenal oo ku ciyaaraya gegada San Siro ee magaalada Milano.
Dhanka Milan: Gattuso ayaa lasoo shirtegi doona isla safkii uu ciyaarsiinayay kulamadii ugu dambeeyay ee uu guulihii ugu dambeeyay kaga gaarey Roma iyo Lazio. Goolka waa Donnarumma, daafacuna waa Calabria, Bonucci, Romagnoli iyo Rodriguez, khadka dhexe waa 3-dii Kessie, Biglia iyo Bonaventura. Weerarka waxaa hoggaaminaya muluqa Cutrone oo ay garbihiisa buuxinayaan Suso iyo Calhanoglu. Kalinic waa kayd.
Dhanka Arsenal: Waxaa safka Gunners ka maqan Nacho Monreal oo muruqa ka sheeganaya iyo Lacazette, oo jilibka ka sheeganaya, waa laba laacib oo sidoo kale ka maqnaa guuldarradii Brighton. Waxaa sidoo kale maqan Belllerin. Khadka dhexe waxaa xajinaya Xhaka iyo Ramsey, waxaana ka horreeya Mkhitaryan, Ozil iyo Iwobi, halka Welbeck uu weerarka buuxin doono.
90 A. DONNARUMMA, 17 ZAPATA, 73 LOCATELLI, 18 MONTOLIVO, 11 BORINI, 7 KALINIC, 9 ANDRÉ SILVA
69 WILLOCK, 16 HOLDING, 10 WILSHERE, 61 NELSON, 35 ELNENY, 30 MAITLAND-NILES
Conti, Abate, Musacchio, Antonelli
Bellerin, Lacazette, Monreal
"Haddii aan ku guuleysano Champions League....".-Modric oo Hadalkaan u sheegay Ronaldo
''Laacibkee caawa aasaasi u noqon doona AC Milan?''